PERSONAL FRAGRANCE Girazi DZEMAHARA
PERSONAL FRAGRANCE Girazi Mabhodhoro Anonhuwira wega mabhodhoro egirazi neCOMI AROMA. Isu tiri vagadziri vemabhodhoro egirazi ehwehwe hwekunhuhwirira uye zvizorwa maindasitiri. Mabhodhoro edu akajairwa akaiswa zvakanaka kuti ubatsire mhando yako. Iwe zvakare une sarudzo yekuve neyako tsika girazi bhodhoro rakagadzirwa ...
Inogona kuputira kavha yekuchengeta zvigadzirwa kwenguva yakareba?
Pombi yemusoro musoro dhizaini yezvigadzirwa zvekuchengetedza ganda inoshandisa simba rekudzosa rematsutso kudzivirira mweya kupinda mubhodhoro, zvichikonzera nzvimbo yekuzorora, nokudaro ichiwana mhedzisiro ye "yega kunze asi kwete". Pese paunodzvanya musoro wepombi, iro diki pisitoni pazasi pe ...
Nei kukosha kuchida girazi reGirazi / Amber?
Basa regirazi rakasviba: Ndiko kuvharidzira mwaranzi yevivi muzuva uye kudzivirira mamwe mafotoensitive anoshanda anoumba kubva mukusanganiswa uye kuora. Kazhinji kutaura, mabhodhoro erima girazi anoshandiswa kune epamusoro-anoshanda ekuchengetedza ganda zvigadzirwa senge antioxidant, anti-kuchembera, uye kuchena. Zvebvunzo ...
Kavha basa rezvinhu zvakasiyana (Girazi, Plastiki)?
Mabhodhoro epurasitiki VS Magirazi emabhodhoro, ndeupi ari nani? Kune matatu makuru marudzi ezvigadzirwa zvezvigadzirwa zvekuchengetedza ganda: plastiki, girazi nesimbi. Pakati pavo, epurasitiki anonyanya kushandiswa anosvika kusvika ku80%, achiteverwa negirazi, nepo simbi inongori chete 8%. Kunyangwe iko kushandiswa kwepurasitiki ndiko kukwidziridzwa ...
Maitiro ekugadzira chinotyisa?
Shockproof kurongedza, kuitira kuti uderedze kukanganisa uye kudengenyeka kwezviri mukati, tora matanho ekudzivirira kuchengetedza kuchengetedzwa kwepakeji yayo. Inowanzo shandiswa yekumhanyisa ekuputira zvinhu zvinosanganisira: mapurasitiki ane furo, huchi hwekadhibhodhi, pulp kuumbwa, kodhi kadhibhokisi, bepa, mweya cushion uye ...
Dhizaini Yekugadzira Uye Mutengo-KOMI AROMA
Mabhodhoro egirazi ezvinonhuwira anonyanya kuve akapatsanurwa kuita: zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda (kirimu, mafuta ekuzora), mafuta anonhuwira, mafuta anokosha, chipikiri chekupikira zvipenga zvakasiyana zvezvikamu zvidiki, zvinopfuura mazana maviri emamirimita emagetsi haawanzoshandiswa muzvizoro. Yekutengesa inopisa zvinhu zvine hombe stock, senge yakakosha mafuta bhodhoro ...
Global Glass Packaging Bhodhoro Musika Maonero
Tsvagiridzo neMisika zvakaburitsa mushumo pane yepasirese girazi kurongedza bhodhoro musika maonero (2019-2027). Sekureva kweshumo, yepasi rose girazi rinovhara mabhodhoro musika wakaita US $ 63.77 bhiriyoni mu2019 uye inotarisirwa kusvika US $ 105.44 bhiriyoni mu2027. Munguva yekufungidzira, iyo compou ...
Matambudziko Akajairika Mukudhinda Kwemvura Kudhinda & Inoenderana Mamiriro
Chikonzero kuongororwa kwezvinetso zvakajairika mukudhinda kwemvura kudhinda uye zvinowirirana nhanho 1. Chigadzirwa chine pitting, pini, matubvu madiki uye kuoneka kwakashata mushure mekuendeswa kwemvura. Chikonzero Kuongorora: • Mamiriro ekushomeka emusangano, guruva rinotenderera, guruva pamusoro peiyo yekushandira kana guruva ...
Girazi Kuteedzera Musika - Kukura, Maitiro, uye Forecast (2020 - 2025)
Musika wepasi rose wekuputira girazi waifungidzirwa pamadhora 56,64 mabhiriyoni mu2019, uye zvinotarisirwa kunyoresa CAGR ye4.39%, kusvika kuUS $ 73.29 bhiriyoni na2025.Girazi Packaging inozivikanwa seimwe yenzvimbo dzinovimbika dzekupakata hutano, kuravira nenzvimbo chengetedzo. Kunyangwe yakatarisana inorema ...
Zvizorwa uye Perfumery Girazi Mabhodhoro Musika - Kukura, Maitiro, uye Forecast (2020 - 2025)
COMI AROMA Uyai neBeautuful Hombodo kuNyika. Pfupiso yeMusika Zvizoro zvepasi rose uye mabhodhoro egirazi emabhodhoro emusika akakosheswa pamadhora emamiriyoni e1809.28 mu2019 uye anofungidzirwa kupupurira CAGR ye3.33% panguva yekufungidzira (2020-2025). Urbanization, kukura kwevanhu vane chiuru chemakore, ...
Nei Uchisarudza Girazi?
COMI AROMA Inokupa iwe Nyama, 100% inogadziriswazve, Yakashandiswazve, Hutano Mabhodhoro eCosmetic Packing, Diffuser's Packaging. www.comiaroma.com Zvakanakira kurongedza magirazi zviri pachena: zvinogara zviripo, zviri mukati, Zviri 100% uye zvinogoneka zvekare, zvinoshandiswazve uye zvinogadziriswazve; zvakachengeteka kuchengeta ...
Vagadziri vePerfume avo vasingakwanise kunhuwa chinhu.
ne admin pane 20-08-25
Makambani ari kuwedzera kutendeukira kune tekinoroji kuti vagadzire akawanda anonyanya kutengesa, anonhuwirira akasarudzika anogona kugadzirwa mumaminetsi mashoma. Gore rakapera, Swiss-based hwekunhuhwirira mugadziri Givaudan Fragrances yakatanga Carto, yekunyepedzera Intelligence-inopa simba turu kubatsira vanonhuwirira. Uchishandisa kubata scr ...
Midziyo yegirazi imhando yegirazi yekugadzirwa kwemidziyo yegirazi, yakadai semabhodhoro, zvirongo, zvinwiwa, uye ndiro. Midziyo yegirazi inomira zvakasiyana negirazi rakatsetseka (rinoshandiswa pamahwindo, magonhi egirazi, madziro akajeka, mafafitera emhepo) uye girazi faibha (inoshandiswa kuputira kupisa, mu fiberglass com ...
Girazi Bhodhoro Kugadzira Maitiro
Girazi Bhodhoro Kugadzira Maitiro Iyo girazi bhodhoro yekugadzira inoitika pafekitori yegirazi mumatanho akawanda. Kupisa End Maitiro Iyo yekutanga nhanho yegirazi bhodhoro yekugadzira maitiro inotanga neanopisa magumo maitiro, ayo anowanzo shandisa yakanyanya huwandu hwekupisa kugadzira ...
Soda Lime Girazi-Chii chinonzi Soda Lime Girazi?
Chii chinonzi Soda Lime Girazi? Soda lime girazi ndiyo inowanzo gadzirwa mhando yegirazi, inoita 90% yegirazi rose rakagadzirwa. Zvichigadzirwa kwemazana emakore, iri musanganiswa wekutanga wesilika, soda, uye lime nezvakasiyana zvinhu zvinobatsira zvezvishandiso pane akasiyana siyana ...
Isu tese tinoziva zvinoitwa nemhute sprayer, kuendesa pfapfaidzo yemhute kugovera chigadzirwa, asi wakambozvibvunza here kuti zvakashanda sei? Kutanga, unoda sei mhute yako? Zvichienderana nezvako chigadzirwa, unogona kusarudza mhando yekukanganisa inoshanda zvakanyanya kwauri. Iyo yakanaka mhute sprayer inopa pfupi, smoot ...
Kutsvaga pasuru yechigadzirwa chako inongova chikamu chekutanga chebasa, ikozvino unofanirwa kuona kuti chigadzirwa chako chinopfuura chisimbiso & kurasikirwa uremu uye kuti huwandu hwunofanira kupihwa. Apa ndipo paunonyanya kusarudza kuvhara kwako. Hezvino zvimwe zvinhu zvekutarisa kana uchisarudza kuvhara kwepakeji yako. Cl ...
Chimwe chezvinhu zvakakosha mukubudirira kuzadzisa chako chaunoda chiri munzira iyo pasuru yako yakashongedzwa. Pane zvakawanda zvakasarudzika sarudzo kana zvasvika pakushongedza uye kupedzisa, asi heano mashoma eanowanzozivikanwa: Mu-Mura Ruvara Mu-muforoma ruvara inzira yakapusa yekutaura ...
Kuteedzera chirongwa chakakosha
Innovation muindasitiri yekupakata inomhanya-mhanya uye haife kupera. Kuchinjika kune irikurumidza kuchinja kurongedza nzvimbo inoda nzira yekumberi-yekufunga yekutsvaga yepamusoro-soro, yakasarudzika, uye mitsva yekugadzirisa mapakeji mhinduro anoshandira izvo zvinoshanduka zvinodiwa nevatengi vako. Heano mana ke ...
Iwo maviri akanyanya kukosha emidziyo yemidziyo ari kufashukira kugona (OFC) uye net yekuzadza kugona (NFC). Kunzwisisa musiyano uripo pakati pezviviri izvi kunogona kubatsira mukutora iyo chaiyo pasuru yechako chikumbiro uye kudzikisira huwandu hwekuzadza nekunyora zvikanganiso zvekudaidzira. Kufashukira Kugona (OFC) T ...
Girazi bhodhoro marara
Midziyo yegirazi inopa mhinduro inogadzikana pane ako ekurongedza zvaunoda. Girazi rinoita 100% kuti riishandisike uye kana rikashandiswazve nemazvo harife rakarasikirwa nehutsanana kana hunhu hwaro zvisinei nekuti rinoshandiswa zvekare kangani. Girazi kudzokorodza zvakare inoshanda uye inoshanda maitiro anogona kutendeudza girazi rekare bo ...